ओम पुरीले दुई वर्ष अगाडि नै गरेका थिए, आफ्नो मृत्युबारे भविष्य वाणी ! – Fewa Times
ओम पुरीले दुई वर्ष अगाडि नै गरेका थिए, आफ्नो मृत्युबारे भविष्य वाणी !
प्रकाशित मिति: January 7, 2017 11:49 am
एजेन्सी –बलिउड अभिनेता ओम पुरी अब हामीबीच रहेनन्। उनको शुक्रबार निधन भएको छ। बलिउडमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल ओम पुरीले दुई वर्ष अगाडि आफ्नो मृत्युका विषयमा भविष्य वाणी गरेका थिए। एक अनलाइनलाई दिएको अन्तर्वातामा ओम पुरीले आफूलाई मृत्युदेखि डर नलाग्ने तर, विरामी हुने हुँ की भन्ने चिन्ताले भने सताउने गरेको बताएका थिए। यतिबेला ओम पुरीमा प्रसंशक र बलिउड फिल्म उद्योग ओम पुरीको शोकमा डुबेको छ।